५० परिवारलाई एउटै कुवा, एक गाग्री पानी भर्न रातभर - Saptakoshionline
५० परिवारलाई एउटै कुवा, एक गाग्री पानी भर्न रातभर
प्रकाशित मिति: आइतबार, आषाढ ०८, २०७६ समय: ७:०४:५८
जिल्लाको पुर्चौंडी नगरपालिका ८ मल्लादेहीकी ८० वर्षीया पार्वती धामी घर नजिकैको कुवामा पानी थाप्न रातिको २ बजे आइपुग्छिन्।थकित शरीर, चाउरिएका गला, सेतै फूलेका कपाल, लट्ठीको साहारमा आवतजावत गर्ने यी वृद्धालाई प्रत्येक वर्ष सुख्खायाममा पानीकै पिरोलो हुन्छ।
गाउँमा रहेको एकमात्र कुवामा पानी सुकेपछि मल्लादेहीबासीलाई खानेपानीको जोहो गर्न निकै मुस्किल भएको छ। दिउँसो पानी थाप्न नपाउँदा राति पानी थाप्न पाउँला भनेर जाग्राम बस्ने समेत रित्तो हात फर्कनुपर्ने बाध्यता रहेको धामीले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘घर नजिकै कुवा छ। कुवा भएर के गर्नु ? कुवामा भएको पानी सुकिसक्यो। तिर्खाले सुकेको घाँटी भिजाउन पनि पाइँदैन्। कहिले राति २ बजे उठ्छु, कहिले १ बजे उठ्छु। पानीको जोहो गर्नमै जिन्दगी बित्यो।’
गायत्री भट्ट कक्षा १० की छात्रा हुन्। तर उनलाई पढाइको भन्दा खानेपानीकै चिन्ताको पिरोले छ। रातिको समयमा आफ्नी आमासँग उठेर उनी पानीको कुवा पुग्छिन्। तर रित्तो हात फर्केर आउँदा निकै नरमाइलो हुने गरेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘मलाई पानीको जोहो गर्ने जिम्मा छ। घर नजिकैको कुवामा पानी सुकेपछि खोलानाला जताको भएपनि पानी ल्याएर गुजरा गर्नुपर्छ। पानीकै कारण पढाइमा असर पुगेको छ।’
केही वर्ष अघिसम्म कुवाकै पानीले गाउँलेलाई प्रशस्त पानी पुग्ने भएपनि पछिल्ला ५ वर्षयता गाउँमा पानीको अभाव चुलिएको स्थानीय हरिश भट्टले बताए। उनले भने, ‘खानेपानीको जोहो गर्न रातको निद्रा हराएको छ। तर खानेपानीको अभाव टार्न सकिएको छैन्। करीब ५० बढी घरपरिवार एकै कुवाको भरमा छौं।कुवामा पानी चाहिनेजति छैन।’
मल्लादेहीमा १० वर्ष अघिसम्म यो महिनामा रोपाइँ चलहपहल सुरु हुन्थ्यो।पानीका मुहान सुक्दै गएपछि रोपाई गर्न छोडेको स्थानीय जानकी बोहराले बताइन्। उनले भनिन्, ‘गाउँमा खानेपानीकै अभाव छ। कहाँबाट रोपाई गर्नु ? लहलह धान फल्ने खेतमा मकै लगाउन थालेका छौं। खानेपानीको जोहो गर्न खोलानालातिर जाने गरेका छौं।’
पुर्चौंडी नगरपालिका ८ मल्लादेहीमा खानेपानीको अभाव हुँदा स्थानीयमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या समेत देखिन थालेका छन् । शुद्धखानेपानीकै अभावमा स्वास्थ्य चौकीमा पानीजन्य रोगका बिरामी बढी आउने गरेको मल्लादेही स्वास्थ्यचौकीका सिनियर अहेव हेमराज भट्टले बताए। उनले भने, ‘पानीको अभावमा स्थानीय खोलानालाको दुषित पानी प्रयोग गर्छन्।
फलस्वरुप उनीमा भाइरल ज्वरो, आउँ, झाडापखाला, टाइफाइडजस्ता रोगहरु देखा परेका छन्।स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधि आएपनि खानेपानीको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय निराश समेत भएका छन्।’गाउँमा खानेपानीको निकै समस्या छ । तर समस्या समाधानका लागि जनप्रतिनिधिले ध्यान दिन सकेका छैन्।’ स्थानीय रामबहादुर बोहराले भने, ‘हाम्रो गाउँमा खानेपानीकै समस्या छ। खानेपानीको जोहो गर्न घरको एक सदस्यले रातदिन समय दिनुपर्ने अवस्था छ।’